अख्तियारका आयुक्त पाठकले घुस खाएर बनाएको यही हो घर, यसरी असुल्थे घुस - Deshko News Deshko News अख्तियारका आयुक्त पाठकले घुस खाएर बनाएको यही हो घर, यसरी असुल्थे घुस - Deshko News
अख्तियारका आयुक्त पाठकले घुस खाएर बनाएको यही हो घर, यसरी असुल्थे घुस
जुन देशका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त नै भ्रष्टचारी छन् ? भ्रष्टहरुसँगै उल्टै करोडौं बुझेर काम गर्दछन् भने त्यहाँ बसेर सुशासनको कल्पना कसरी गर्न सकिएला ? कुनै पनि सार्वजानिक निकायमा हुने गरेको भ्रष्टाचार हेर्दै आएको संस्था हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ।
तर यहाँका आयुत्त नै कमाउ धन्दामा लागेको पर्दाफास भएको छ । लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि बदनाम भयो । भ्रष्टचारीहरुसँग उल्टै लोकमान र आयुक्तहरुले गर्ने गरेको बार्गेनिङका कारण । लोकमान त त्यहाँबाट पदच्यूत भएर गए तर लोकमान सिंहका प्यारा राजनारायण पाठकको कार्यकाल बाँकी नै छ ।
यी यस्ता आयुक्त हुन जस्ले लोकमान सिंहको साथ र सहयोग पाएरै आयुक्त नियुक्त भएको बर्ष दिन नपुग्दै करोडौंको बंगला खरिद गर्न भ्याए । उसो त राजनारायाणको विगतलाई चिन्ने र उनीसँगै काम गरेकाहरु सरकारी वकिल क्षेत्रमा उनी अति बदनाम र भ्रष्ट छवि भएका ब्यक्ति भएको सुनाउँछन् ।
पाठकको महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा कार्यरत रहदादेखि नै विवादित थिए ।उनलाई कांग्रेसले बोकेर अख्तियारमा पठायो । पाठकले पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी छोरी प्रिया पाठकलाई एमबीबीएस अध्ययन गराउनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेका थिए ।
उनले छोरी प्रियालाई जबर्जस्ती पास गराउनका लागि अख्तियारको दुरुपयोग गरेका थिए । विभिन्न आयोजनाका भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरीहरू सेटिङ गर्दै तामेलीमा राख्ने काममा आयुक्त पाठक नै प्रयोग हुँदै आएका थिए । कार्कीका प्रतिशोधपूर्ण कदमलाई अरु आयुक्तहरुले साथ नदिएपनि पाठकले कार्कीलाई सहयोग गर्दै आएका थिए ।
कार्कीले पाठकलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी तोकेका थिए । उनी अख्तियारको आयुक्त बनेको केही महिनामै काठमाडौंको शान्तिनगरमा तीन कारोड असी लाख भन्दा माथि रकमको आलिसान बंगला खरिद गरेका थिए । शान्तिनगरको बाबुछिरी चोकमा रहेको निमा पासाङको घर उनले खरिद गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार उनी त्यहाँका आयुक्त बनेर गएसँगै एक वर्षको दौरानमा पचाँस करोडभन्दा बढी पुगिसकेको छ । आयुक्त पाठकले भ्रष्टाचारी एवं शंकास्पद व्यक्तिहरुसँग अनुचित सम्बन्ध राख्ने र उनीहरुसँग आर्थिक लाभ लिने गरेको तथ्य पर्दाफास भइसकेको छ ।
पाठकले लोकमानसँग मिलेर विभिन्न मन्त्रालयका ठेक्कबापट्टा र सरुवा बढुवामा चरम हस्तक्षेप गर्दैआएका थिए । लोकमान पदच्युत भए पनि पाठक त्यही आयुक्तको रुपमा कार्यरत थिए । उनले भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेकाहरुसँग सेटिङ मिलाउने काम गर्दै आएका थिए ।